Tokkummaan Ulee Lun’aa Ta’uu Hin Qabu! – Oromedia
Home » Yaada » Tokkummaan Ulee Lun’aa Ta’uu Hin Qabu!
Jaataniin qabsoo waanuma akka tasaa ka’uun akka milkoomu kanneen yaadan ni jiru ta’a. Qabsoon tokko yeroo hedduu waan baay’een gaadi’amuu danda’a. Akka namooti tokko tokko tilaamamanittis qabsoon Oromoo kan dafee galma gahuu dhabe, waan tokkummaan Oromoo jabaa hin taaneef. Kanneen biroo immoo qabsoon Oromoo waan sabboonummaan Oromoo sadarkaa walfaanummaa irra hin geenyeef akka laaffatetti hubatu. Kanneen qabsoon kun laafina hoggansaatiin akka arriiquu dadhabetti ilaalan illee akka jiran beekamaa dha. Garuu, jaataniin qabsoo bilisummaa adeemsa yeroo dheeraa fi ifaajee olaanaatiin akka milkoomu muuxannoo qabnu irraa hubatuu dandeenya.
Dhugaatti, haallen kunneen yoo dhuguma jiraatan dhiibbaa qabaachuun isaanii falmisiisaa miti. Garuu, mudaaleen kunneen jiraachuu waanti ifatti mul’isuu qorannaa fi qo’annaan gabbatee hin jiru. Yeroo hedduu dubbiin akka mudaatti dhiyaatu hedduun isaa kan qorannoon hin mirkanoofne garuu odeessa waloo keessaa kan madduu dha. QBO galmaan gahuuf, akka fakkeenyaatti, ABO tooftaa fi tarsiimoo isaaf ta’u baafachuu danda’a. Kun imaammta ABO keessaa kan madduu, kaayyoo ABO immoo kan masakamuu dha. ABOn yeroo hojii qabsoo fardeessuuf hojjatutti, kan utubaa ta’uuf gaaffii sabaa ti. Gaaffiin saba keenyaa, mirga humnaan sarbame, deebifachuu dha.
Tokkummaa Oromoo ilaalchisee, fakkeenyaaf, yeroo hedduu kan himamuu fi kan mul’atu tokko miti. Sababni isaa dhimma Tokkummaa kana irratti dhibdeen jiru, kan ummataa otuu hin taane kan jaarmiyaa siyaasaa keessatti yeroo yeroon mul’atuu dha. Dhibdeen jedhame iyyuu kan ilaalchaa fi sagantaa jaarmiyoota siyaasaa Oromoo irraa maddan malee kan hundee Oromummaa irraa maddanii miti. Tokkummaan jaarmiyoota Oromoo dagalee qabsoo Oromoo ta’us, qabsoo Oromoo milkeessuuf kan dhumaa ta’uu hin danda’u. Tokkummaan jaarmiyaa siyaasaa kunis kan dhimma waloo irratti waliin hojjatuu malee kan dirqama caayaa yookaan gaaddisa tokko jalatti kurfeeffamuu ta’uu dhiisuu mala.
Akka ilaalcha kiyyaatti yeroon keenya gaarii kan nu jalaa badaa turee fi jiru waan hojjachuu qabnu irratti ta’ee natti hin mul’atu. Yeroon keenya irra guddaan kan gubataa turee fi amma illee gubataa jiru dhimma tarkaanfachiisaa ta’an irratti ta’es natti hin mul’atu. Kun immoo maraammartoo nu keessaa hin baane ta’ee ammas nu waliin jira. Akka kiyyatti qabsaa’oti bilisummaa Oromoo kanneen ABO jalatti miseensomanii qabsaa’aa jiran ammaan booda waan armaan gadii arafan irratti xiyyeeffatanii hojjachuu qaban.
Tokkoffaa, qabsoo bilisummaa Oromoo si’eessuu irratti bobba’uu qaban. Qabsoon tokko waan qabuu fi waan isa hanqatu qorannoo fi qo’annoon adda baafatanii beekuun hojii murteessaa dha. Ittaansanii, kanneen hanqina agarsiisan akkamiin akka guutaman sacca’anii beekuu ta’a. Kun qabsoo san haala yeroo wajjin tarkaanfachiisuuf waantota babaachisan qoratanii baasuun akka hojii irra oolu gochuu gaafata.
Lammaffaa, diina keenya karaa maraan beekuu irratti hojjatuu qabna. Namni jabinaa fi laafina diina isaa adda baasee hin beekne diina isaa caaluu hin danda’u. Diinni keenya yeroo hedduu amaloota akka gaararraa jijjiiramaniin of dhoksee qabsoo keenya irratti immoo dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Haala kana keessa bahuu kan dandeenyu immoo diina keenya beekuun akkamitti dhiibbaa isaa ofirraa kka xiqqeessinu irratti hojjachuun ta’a.
Sadaffaa, aadaa eeggattummaa keessaa bahuu irratti hojjachuu qabna. Yeroo hedduu akkan hubadhutti, hojii qabsoo keenya kaka’umsaa fi warraaqummaan hojjachuun hagana mirqaansisaa miti. Hojiin kamuu waaltinaan hojjatamuu akka qabu nan hubadha. Garuu, kun taa’anii oggana olaanaa eeguu jechuu miti. Kana malees, hojii qabsoo keenyaa kan beekumsa ammayyaatiin qaramaa fi si’aahaa adeemuu malu akkuma baroottan dabraniitti aadeffamee akka adeemu gochuun waan qajeelaa natti hinfakkatu. Namuu akka miseensaa fi deeggaraa tokkootti qabsoon kun akkamiina akka jabaatuu qabu irratti waan danda’e kaka’umsa mataa isaatiin hojjachuun irree qabsoo keenyaa gabbisuu qaba.
Kan dhumaa, qabsoo keenya karooraan raawwachuu dha. Hojiin qabsoo hojii karooraa fi sagantaan hojjatanii bu’aa miidhagaa akka fidu godhanii dha. Yeroo hedduu qabsoon tokko otuu hojiin hin mulatiin dura si’a hedduu shaakalamuu qaba. Kun immoo kan karooraan itti adeemanii fi raawwatan malee kanuma akka tasaa itti bahanii miti. Karoorfatanii hojjachuun bakka yaadan gahuun, muuxannoo milkaa’ina hojii keessaa isa guddaa dha.
Akka waliigalaatti, haala yeroo ammaa adeemaa jirutti dhimma bahuuf waan hedduu gochuun nu barbaachisa ta’a. Waan goonu garuu miirumaan itti dhiibamnee kan goonu otuu hin taane ammummaa kaasnee karoorfannee irratti hojjachuun ta’uu qaba. Yeroo kana keessatti dhimma bahuuf, ABO waamicha qabsoo godhee jira. Kun immoo hojiitti hiikamu qaba. Haala kana milkeessuuf miseensoti karaa danda’an maraan hojjachuu qaban. Baroota darban otuu dhimma Tokkummaa irratti walmaryannuu dabarsuun keenya amma gara tokkotti nu hin basu taanaan, haalli adeemsa keenyaa sun irra deebi’amee ilaalamuu qaba.
Akkuma beekamu, ABOn tumsa qabsoo barbaannaan yeroo kamiyyuu waamicha godhuuf mirga guutuu qaba. Waamichi kun otuu waldhabdeen dhaabota Oromoo gidduu jiru hin hiikamiin dhiyaachuu hin qabu kanneen jedhan jiraachuu malan.Tokkummaan jaarmiyoota Oromoo dhugoomuun qabsoo keenyaaf bu’aa akka qabu beekamaa dha. ABOn garuu, humna diinaa laaffisuuf waan feesisan mara godhuuf hayyama jaarmiyoota kaanii waan barbaadu natti hin fakkaatu. Tokkummaa jaarmiyoota Oromoo fiduuf hojjachuun hojii of-danda’ee adeemuu dha. Haata’u malee, tumsa qabsoo horachuuf karaan jiru karaa tokkummaa jaarmiyoota Oromoo qofaa miti.
ABOn tokkummaa jaarmiyoota Oromoo dhugoomsuuf akkuma hojjataa jirutti, tumsa qabsoo Oromoo argamsiisuufis yaalii malchiisan mara gochuutti jira. Yeroo kana keessattis, qabsoon keenya akka daran guddatuufi xiyyeeffannoo argatuuf yaaliin godhamaa jiru ragaa guddaa dha. Tattaaffii gama ABOn jiru deeggaranii qabsoo Oromoof tumsa argamsiisuunis jaarmiyoota siysaasaa Oromoo biroo irraa illee kan eegamuudha. Tattaaffii tumsa argamsiisu hojjachuu dhiisanii, tokkummaa jaarmiyoota Oromoo abbalaa hafuun garuu sirrii hin ta’u. Kanneen otuu tokkummaan jaarmiyoota Oromoo hin dhugoomiin, tattaaffii tumsa argamsiisu gochuu lagatan yoo jiraatan, deebiin isaaniif kennamu tokkummaan yeroo mara ulee lun’aa ta’uu hin qabuu dha.
Haa qabsoofnu; ni bilisoomnaa!
Previous: HANGUMA NUUTI JABAANNU, SHIRRI DIINAAS JABAACHU HUBADHU!!
Next: The missing part of the OLF story